Manohitra ny fitondran-tena ve ny hetsika Zionista? Raby Michael Avraham
Manohitra ny fitondran-tena ve ny hetsika Zionista?
Responsa > Sokajy: Jeneraly > Manohitra ny fitondran-tena ve ny hetsika Zionista?
Adir Nanontaniana 7 volana lasa izay
Salama Raby ô, hitako fa ianao no namaritra ny tenanao ho "Zionista ara-pivavahana", tsy misy tsipika, mba hanamafisana fa ny Zionismanao dia avy amin'ny soatoavina ara-môraly manerantany (ihany, na indrindra indrindra). Noho izany, te hanontany anao aho hoe inona ny hevitrao momba ity lahatsoratra manaraka ity:
“Inona no atao hoe fanavakavaham-bolon-koditra?
Ny fanavakavaham-bolon-koditra dia fanavakavahana na fankahalana mifototra
Inona no atao hoe Zionisma?
Ny Zionisma dia hetsika ho amin'ny fananganana fanjakana jiosy any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Mediterane, faritra izay tamin'ny fotoana nipoiran'ny Zionisma dia nonenan'ny ankamaroan'ny tsy Jiosy - Palestiniana - Kristiana sy Silamo.
Eny ary, fa ahoana no mahatonga ny Zionisma ho fanavakavaham-bolon-koditra?
tena tsotra. Tadidinao ny famaritana ny fanavakavaham-bolon-koditra? Andao hampiasa azy:
Fanavakavahana eo amin'ny fototra ara-poko - Ny Zionisma dia tsy nanontany ny hevitry ny Palestiniana teratany momba ny fananganana fanjakana jiosy ao amin'ny tanindrazany. Fanitsakitsahana mafy ny foto-kevitry ny demokrasia izany: na dia mandrafitra akaiky ny 100%-n'ny mponina aza izy ireo, dia tsy nisy nisalasala nanontany ny hevitr'ireo Palestiniana teratany. Nahoana? Satria tsy Jiosy tsotra izao izy ireo. Ny fitsipika demokratika misongadina kokoa - ny sitrapon'ny maro an'isa - dia lavina amin'ny mponina teratany ao amin'ny firenena, fa raha avy amin'ny fiaviana ara-poko diso izy ireo. Mazava ho azy fa nanohana ny fahaleovantena Arabo ireo Palestiniana teratany, saingy tsy nahaliana ny hevitr'izy ireo. Izany no antony nanohitra mafy ny Zionista nandritra ny taona maro nametrahana ny fananganana filan-kevitra mpanao lalàna - satria ny sitrapon'ny maro an'isa dia hanafoana ny orinasa Zionista.
Fankahalana ara-poko - Hatramin'ny nisian'ny Zionisma, ny Palestiniana teratany monina ao amin'ny tanindrazany dia hita sy noheverina ho "sakakana". Nahoana? Satria ny Zionisma - ny fananganana fanjakana "Jiosy" - dia mitaky Jiosy maro an'isa ao amin'ny firenena. Ary satria nisy ny ankamaroan'ny Palestiniana tsy Jiosy tamin'izany fotoana izany, dia nanjary tsy naniry ny fisian'io mponina teratany io. Niteraka tranga tsy mampino ny Zionisma: noheverina ho tsy tiana ny olona - noho izy ireo nipetraka tao an-tranony. Ary rehefa miantso ny Palestiniana ho "tsilo eo anilany" ny mpanao politika israeliana ankehitriny (toa ny praiminisitra israeliana ankehitriny, Naftali Bennett, no nanoratra ny lahatsoratra, izay nilaza izany angamba noho ny fahasorenana noho ny fisian'ny Palestiniana tao amin'ny firenena. “Misabaka” amin’ny fanakambanan’ny Israely azy ireo ny faritany).
Manana valiny amin'ireo filazana ireo ve ny raby? Toa filazana tena matotra ireo. Satria ianao nilaza fa Zionista tahaka an'i David Ben-Gurion dia Zionista, dia tsy namaly azy ireo ianao tamin'ny valiny hoe: "Izao no nandidiana antsika ao amin'ny Torah." Ny fanontaniana àry dia hoe inona no valin-teninao amin’izy ireo, amin’ny maha “sokajy laika”.
mikyab Staff Voavaly 7 volana lasa izay
Ny hevitro dia hoe tsy misy dikany ity lahatsoratra manaraka ity.
Voalohany, ny Zionismako dia tsy mifototra amin'ny soatoavina ara-moraly, tahaka ny fianakaviako tsy mifototra amin'ny fitondran-tena. Zava-misy fotsiny ireo. An'ny fianakaviako aho ary anisan'ny oloko koa. Ary tahaka ny ilan'ny fianakaviako trano no ilain'ny oloko koa trano.
Tao amin'io faritra io dia niaina ireo teratany tsy manana ny maha-firenena azy, tsy misy fiandrianam-pirenena ary tsy misy fanjakana. Tsy nisy olana ny tonga nanorim-ponenana teto sy niezaka ny hanangana tokantranom-pirenena sady miaro ny zon’izy ireo. Indrindra moa dia nanolotra fisaratsarahana ho azy ireo izy ireo ary tsy nety. Nandeha niady ka nihinana azy. Koa aza mimenomenona.
Ny isa takiany dia tsy manana Namaly 7 volana lasa izay
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny isan'ny mponina tao amin'io faritra io tamin'ny fotoana niandohan'ny Zionisma dia tena vitsy, ary ny ankamaroany dia mpifindra monina avy amin'ny firenena manodidina. Miaraka amin'ny fitomboan'ny hetsika Zionista sy ny fivoaran'ny varotra sy ny toe-karena, maro kokoa no nisafidy ny hifindra monina eto. Taonjato teo ho eo taty aoriana dia nanapa-kevitra ihany koa izy ireo fa vahoaka izy ireo, ary tantara ny ambiny.
Interpretation Copenhague Namaly 7 volana lasa izay
Fanavakavahana tsy noho ny fiaviana fa noho ny fananana. Rehefa manana zo hanapa-kevitra ianao hoe iza amin'ireo vahiny no hiditra ao an-tranonao, dia tsy "fanavakavahana ara-poko" ianao. Tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fisorohana ny fidirana mialoha sy ny famotsorana ireo vahiny raha toa ka nanafika ny tranonao izy ireo raha tsy teo ianao.
Taranak'i Babylona sy Roma (anisan'izany ireo natsangantsika tao amin'ny fianakaviana) ny vahoakan'Israely, ary nanomboka teo dia heverina ho tompon'ny tany ara-dalàna ny mpandova.
Emanuel Namaly 7 volana lasa izay
Saingy na eo aza izany, mihevitra ny Raby Michi fa mety hisy ho avy eo amin'ny fitondrana ary koa manohana ny "fanitsiana" safidy: indro ny Ben Barak very hevitra:https://www.srugim.co.il/620627-%d7%a8%d7%9d-%d7%91%d7%9f- %d7%91%d7%a8%d7%a7-%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%93%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa
Beit Yosef Lehava On Fikambanana mpanavakavaka ve ny Lehavah? (Tsanganana 484)
Tirgits On Valiny ny toriteny nataon'ny olon-kendry - Beer Hagola
Ara-tsaina On Fikambanana mpanavakavaka ve ny Lehavah? (Tsanganana 484)
mahafinaritra On Valiny ny fifidianana